Dr. Tint Swe's Writings: April 2016
၁။ ဒေါက်တာခင်ဗျာ Welding (Co2, Ar) အငွေ့အသက်တွေကို ရှုရှိုက်မိခြင်းအားဖြင့် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
၂။ ဆရာ ကျွန်တော်အသက်က ၂၉ပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့့ မှာနေပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဝရိန်ဆော်တဲ့အလုပ် လုပ်ရင်းနဲ့ မျက်စိကိုထိတာကနေ အခုဆိုရင် အိပ်ရေးပျတ်တဲ့အခါတို စာဖတ်တာနည်းနည်းများတဲ့အခါတို့ ဖုန်းတွေ ကွန်ပြူတာတွေကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးတဘက်ကပူလာပြီး ကြည့်ရတာဝါးဝါးသွားတယ်ဆရာ။
၂ဝဝ၄ မတ်လ ၁၁ နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုထဲမှာ အမေရိကန်မှာ ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းမယ် လူပေါင်း ၄ သိန်းကျော် လုပ်ကိုင်နေရတယ်၊ သူတို့မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ရှိနေကြရတယ်၊ အဲဒါတွေထဲမှာ အသက်ရှူလမ်း၊ အာရုံကြောနဲ့ မျိုးပွားလမ်းတွေမှာ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ပါရှိခဲ့တယ်။ သုတေသနတွေ ဆက်လုပ်စရာတော့ ရှိတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က အတော်ကြီးပြည့်စုံတဲ့ ဂဟေဆော်ခြင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သိပ္ပံစာပေ ဆန်းစစ်ချက်တခု ထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဂဟေဆော်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးစာတမ်း အဆိုအရ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ထိခိုက်ခြင်း နဲ့ တခြား အသက်ရှူလမ်းဝေဒနာတွေ အများစုမှာ ခံစားကြရတယ်လို့ ပါရှိခဲ့တယ်။ တချို့ကလည်း အဆုပ်-ကင်ဆာ၊ အာရုံကြောရောဂါ ဖြစ်မလားပြောကြတယ်။ အထောက်အထားတွေတော့ မပြည့်စုံပါ။
• အငွေ့ကနေ မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ရင်ပတ်နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကို ကလိမယ်။ ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်ကနေ အဆုပ်ရောင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အန္တရာယ် နည်းအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ AFSCME fact sheet ထဲမှာ ဖေါ်ပြထားတာတွေကတော့ -
ဆရာ Enervon C နေ့တိုင်းသောက်ရင် အသည်းရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဘာဆိုးကျိုးများရှိပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါ။
Enervon-C Tablets ဆေးပြားထဲမှာ ဗီတာမင် ဘီ-၁၊ ဘီ-၁၂၊ ဘီ-၃၊ ဘီ-၅၊ ဘီ-၆ နဲ့ဗီတာမင်စီတွေပါဝင်တယ်။ အဲတာတွေထဲက ပြောစရာကတော့ ဗီတာမင် (စီ) ဖြစ်တယ်။
ဗီတာမင် (စီ) ဟာ (အက်စကောဗစ်အက်စစ်) ဖြစ်တယ်။ နည်းရင် Scurvy (စကာဗီ) ရောဂါဖြစ်တယ်။ မအီမသာ ခံစားရတာ၊ မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်တာပါ။ ပြီးတော့မှ ခြေထောက် အရေပြားမှာ အစက်အပျောက်လေးတွေ ပေါ်တယ်။ သွားဖုံးရောင်လာမယ်။ နေရာတချို့မှာ သွေးထွက်မယ်။ ကြာလာရင် အနာတွေဖြစ်မယ်။ ပြည်တည်နိုင်တယ်။ သွားတွေ ကျွတ်ထွက်မယ်။ အသားဝါဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ အာရုံကြောတွေထုံမယ်။ သွေးယိုတာနဲ့ သေဆုံးနိုင်တယ်။
ပင်လယ်ခရီးသွားသင်္ဘောသားတွေ၊ ပင်လယ်ဓါးပြတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ အသီးအရွက် စိုစိုစိမ်းစိမ်းမစားရတာကြာလို့ ဖြစ်တယ်။ ကုသရာမှာ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေစားစေရတယ်။ လိမ္မော်သီး။ သံပုရာသီး၊ ကမ္ဗလာသီး၊ ရှောက်သီး အမျိုးမျိုး၊ ဆီးဖြူသီး၊ စပျစ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆီးသီး စတာတွေမှာများတယ်။ အသားငါးတွေမှာလည်းပါတယ်။
ဗီတာမင် (စီ) ကို အအေးမိတာအတွက်လည်းပေးတာ တချို့သုတေသနက ထိရောက်တယ်ပြောတယ်။ အနာတွေ ကျက်တာကောင်းစေဘို့လည်း ပေးလေ့ရှိတယ်။ နှလုံး၊ သွေးကြောအတွက်လည်းကောင်းစေတယ်။ မျက်စိရေတိမ်၊ သည်းခြေအိတ်ရောဂါ၊ သွားအခေါင်းပေါက်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ခုခံအားကောင်းစေဘို့ရာ၊ ပန်းနာ၊ လေပြွန်ရောင်တာ၊ ကင်ဆာ၊ အဆစ်နာ၊ ကလေးမရသေးတာ၊ ဆီးချို စတာတွေမှာလည်းပေလေ့ရှိတယ်။ အရက်ဖြတ်၊ ဆေးဖြတ်သူတွေအပြင် အသက်အိုစာတာနည်းစေဘို့ဆိုပြီးလည်း ပေးတယ်။ သွားဖုံးရောဂါ၊ အရေပြားအနာ၊ အရေပြားစိုပြေစေဘို့၊ HIV ပိုးရှိနေတာ၊ လေနာ၊ ဝမ်းကိုက်၊ ဝက်ခြံ စတာတွေအတွက်လည်းပေးတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေ၊ မှတ်ဥာဏ်နည်းသူလူကြီးတွေ၊ ဥာဏ်ရည်နည်းတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်းပေးတယ်။
လူကြီးတယောက်၊ တနေ့မှာ ဗီတာမင် (စီ) 65 to 90 mg လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီတာမင် (စီ) များရင်တော့ ဝမ်းလျှော၊ ပျို့၊ အန်၊ ရင်ပူ၊ ခေါင်းကိုက်၊ အိပ်မရ၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တာတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
ပြည်ပနဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ပါတီတဖွဲ့တည်းလုပ်ခဲ့သူတယောက် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်း ကြားရတယ်။
နိုင်ငံရေးအတွက် ပြည်ပထွက်ကြသူတွေ ၁၉၈၈ မကုန်ခင်ကတသုတ်နဲ့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတသုတ်တို့က အများဆုံးဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၂၈) နှစ်နဲ့ (၂၆) နှစ်ကြာသွားပြီ။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ ၂ဝ၁၂ မှာ တခါနဲ့ ၂ဝ၁၆ မှာတခါဖြစ်တယ်။ ပြည်ပရောက်ပြီးမှ အထဲပြန်ဝင်သူဦးရေ မများလှပါ။ အခုထိမှမဝင်ကြသူတွေဟာ ပြည်ပမှာပဲ ခေါင်းချတော့မယ့်သူတွေလို့ ယေဘုယျပြောလို့ရတယ်။
ပြည်ပနဲ့ တောထဲကိုထွက်မလာခင်က အခြေခံတွေ၊ ထွက်လာခဲ့တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေ၊ ထွက်လာပြီးလုပ်ကြတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ နည်းနာတွေ မတူကြသလို အပြောင်းအလဲရှိလို့ အကဲဖြတ်ကြတာမှာလည်း မတူကြပါ။ ဘဝတွေ တစစီဖြစ်သွားကြတာတော့ တူကြတယ်။ နောက်ဆုံးလူတွေက ခေါင်းချတာမှာပါ တူကြတယ်လို့ ပြောရတော့မယ်။
ဘဝတခုစီ ဇာတ်သိမ်းသွားပေမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ရှည်ကြီးကတော့ ဆက်ကနေပါတယ်။ လူတိုင်းကိုယ်စီ ခြေရာ လက်ရာလေးတွေ ချန်ထားရစ်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက် အသက်ပေးသွားသူအားလုံး (အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူမျိုမရွေး) ကို ဦးညွတ်ပါတယ်။
- Hemorrhoidectomy ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်နည်းကို အများဆုံးသုံးတယ်။
- Stapled hemorrhoidectomy နည်းက ဆိုးနေတာမျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးလို့ဆိုတယ်။ မိနစ် ၃ဝ သာကြာတယ်။
Piles Q and A လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေး-အဖြေများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/piles-and-pregnancy.html
Piles and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိပ်ခေါင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/piles-q-and.html
Piles (Hemorrhoids) Treatment လိပ်ခေါင်းကုနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/piles-hemorrhoids-treatment.html
• (လဘ်) ထိုးခြင်းမပြုပါရန်လို့ စည်းကမ်းတခုတွေ့ပါတယ်။
(လာဘ်) လို့ရေးရပါ။ ပါဠိလို (လာဘ) ကနေလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။
• တချို့က (လာဒ်) နဲ့ ရေးသေးတယ်။ အဲဒါက result ကိုသုံးတာမို့လားဆရာ။
(ရလဒ်) မှာ ရေးချမပါ။ (ဒဏ်) မှာလည်းမပါဘူး။
• ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက သမီးဖြစ်နေတာနဲ့ တပုံဆန်ထဲပါပဲ။
(တပုံစံတည်း) လို့ ရေးရတယ်။
• (သက်ဦး) လို့ရေးတာနဲ့ (နို့မဝမှာဆိုးလို့) လို့ရေးတာကိုပြင်ပေးတော့ ကျေးဇူးတင်သူ တယောက်တိတိရှိတယ်။
အခုမှ သဘောပေါက်တာဆရာ။ ဆရာက (သားဦး) လို့သာရေးရတယ်၊ (နို့မဝမှာစိုးလို့) လို့သာရေးရတယ်လို့ ပြန်ဖြေပေးတော့ ဆရာက ဘာလို့ရေးပါလိမ့်ပေါ့။ ခုမှသိတာ။ ဆရာက အမှန်ပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဆရာ။
(ကူးဆက်) ပုံလို့မေးကြတယ်။ ကူးစက်လို့ရေးရတယ်။ ကူးဆက်ဆိုရင် သစ်ပင်တွေကိုင်းကူးပြီးဆက်တာမျိုးဖြစ်သွားမယ်။ ကူးစက်ခံရမှာ စိုးရိမ်သူတွေ ကူးဆက်တာမလုပ်ပါနဲ့။
(တားဆေးဖျတ်) လို့ရေး မေးတာလည်းမကြာမကြာလာတယ်။ (ဖြတ်) လို့သာရေးရတယ်။ (ဖျက်) ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာမှာသာ ရေးရတယ်။
(ခလေး) လို့ရေး မေးသူတွေကလည်း အတော်များတယ်။ (ကလေး) လို့သာရေးရတယ်။ ကလေးရချင်သူတွေ ကလေးသတ်ပုံမှန်ပါစေ။
ကျွန်တော်လည်း သတ်ပုံမှားရေးတတ်တယ်။ စာရိုက်ရာမှာ ကျတာ ပိုတာ လိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ ပြန်ပြင်ပါတယ်။
မြန်မာ့သတင်းထူးသတင်းဦးများ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတင်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူရေတွက်တာကနေ ကာလသားရောဂါ ကူးစက်နိုင်သလား ပို့စ်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲတာကို ရှယ်သူတွေလည်းမနည်းပါ။ သတင်းမှာ အမျိုးသမီးတဦးကို ဆေးစစ်တော့ ကာလသားရောဂါရနေတယ်လို့ အဖြေထွက်။ သူ့အမျိုးသားကိုစစ်တော့ ကာလသားရောဂါမတွေ့။ အိုဂျီကနေ ရောဂါဇစ်မြစ်ကိုရှာ။ အမျိုးသမီးက ဘဏ်ဝန်ထမ်းဖြစ်။ ငွေစက္ကူတွေကိုင်၊ လက်မဆေးပဲ သန့်စင်ခန်း ဝင်ရာကနေ ကာလသားရောဂါ ကူးစက်တယ်လို့မှတ်ချက်ချ။ ကာလသားရောဂါဟာ လိင်ဆက်ဆံရာကနေသာမက ကြားနေအရာဝတ္တုတွေကလည်းကူးစက်။ ဂနိုနဲ့ ဆစ်ဖလစ် ဗိုင်းရပ်တွေဟာ လူခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ပြီး ၂ နာရီမှာ ၃ နာရီအကြားထိ အသက်ရှင်နိုင်။ စိုစွတ်နေတဲ့ တဘက်၊ စောင်၊ အိပ်ရာခင်းနဲ့ အိမ်သာအိုးတွေမှာ လူ့ကိုယ်ကနေထွက်ခွာပြီး ၁ဝ နာရီမှ ၁၈ နာရီအထိ အသက်ရှင်နိုင်။ ၈ဝ% ငွေစက္ကူသစ် တရွက်မှာ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပိုးတွေနဲ့ ဘီပိုးစတဲ့ပိုးမွှားပေါင်း ၁၂ သိန်း ကျော်တွေ့ရှိ။ တနာရီကြာရင် လက်မှာ ရောဂါပိုးမွှားပေါင်း သုံးသန်းကျော်တွေ့ရှိ။ သာမန်သူတွေထက် အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေ ၆ ဆ ပိုမြှင့်မား။ အချိန်ပိုကြာလေ ကူးစက်နိုင်မှု ပိုမြှင့်မားလေလို့ ဖူးဖူး (China.com) ကနေရေးထားပါတယ်။
၁။ ဆေးပညာအရ သတင်းထဲမှာရေးတာ ခိုင်မာမှုမရှိပါ။
၂။ ကာလသားရောဂါခေါ် ဆစ်ဖလစ်ဟာ လိင်ကတဆင့်သာကူးစက်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိသူဆိုရင် လိင်အင်္ဂါချင်း ထိတွေ့မှုနဲ့ ပိုးရှိမိခင်မွေးလမ်းကနေမွေးတဲ့ကလေးကို ကူးစက်တယ်။ ဆစ်ဖလစ်ရှိသူရဲ့ အနာနဲ့ အနီကွက်ကို ထိကိုင်မိရာကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်။ အသက်ရှူလမ်း၊ အစာလမ်းတွေကနေ မကူးစက်ပါ။ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ကိုင်ရာကနေ မကူးစက်ပါ။
၃။ ကာလသားရောဂါ (သို့) လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါပိုး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
အဲတာတွေထဲမှာ လိင်လမ်းရေယုံ၊ လိင်လမ်းကြွက်၊ အသည်းရောင် (ဘီ) နဲ့ HIV တွေကသာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်တယ်။ စာထဲမှာရောရေးထားတာ မှားတယ်။
၅။ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ T. pallidum ပိုးဟာ 6-15 micrometers ရှည်ပြီး 0.25 micrometers အချင်းရှိတယ်။ ပိုးရှိနေသူရဲ့အနာနဲ့ထိတွေ့မှသာကူးစက်တယ်။ ကျား-မ လိင်အင်္ဂါတွေ၊ စအိုနဲ့ ပါးစပ်နားမှာ အနာလာဖြစ်မယ်။ လူကိုယ် အပြင်ဖက်မှာ မသက်မရှင်နိုင်ပါ။ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာမွေးယူလို့လည်းမရပါ။ အိမ်ရှင်ပေါ်မှာသာပေါက်ပွါးတယ်။ အချိန်ပိုကြာလေ ကူးစက်နိုင်မှု ပိုမြှင့်မားလေဆိုတာ မှားတယ်။
ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့်ဆိုတာ (မနာတဲ့) အနာပေါက်တာဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင်ခံရပြီးနောက် ၁ဝ ရက်ကနေ ရက် ၉ဝ အတွင်း ဖြစ်တယ်။ ဆေးမကုလည်း ၃-၆ ပါတ်နေရင် ပျောက်သွားမယ်။ ဒုတိယအဆင့်ဆိုတာ အနီရောင်အကွက်ဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ မယားဘူး။ နီညိုညို အရောင်ရှိတယ်။ လက်ဖဝါး-ခြေဖဝါးမှာတွေ့တာများတယ်။ အရေပြားအပါးစား (မြူးကပ်စ် မင်ဘရိန်) မှာ အနာ ဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ တက်စေ့တွေရောင်နိုင်တယ်။ လည်ချောင်းနာနိုင်တယ်။ နေရာကွက်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်နိုင်တယ်။ ကြွက်သားတွေနာနိုင်တယ်။ အားကုန်နေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အဲတာတွေလည်း ဆေးမကုပဲပျောက်အုန်းမယ်။
မေးခွန်းပေါင်း (၂ဝ) ကျော်ဖြေပြီးပြီ။ မေးတဲ့အရေအတွက်က လျှော့ကျတယ်မရှိပါ။
မေးတာကိုသဘောမပေါက်စေနိုင်တဲ့ သတ်ပုံအမှားတွေလည်း (၂ဝ) လောက်ပါတယ်။ အမှားနည်းလာတယ်လို့ မထင်ပါ။
မေးနည်းစည်းကမ်းကို (၂ဝ) လောက်ပို့ပေးရတယ်။ အသက်-မ-ကျား မပြောကြားလိုသူကဆို ပိုတောင် များလာသလားမသိပါ။
ကျွန်တော့်ပြဿနာက အချိန်မကုန်သင့်ပဲကုန်တာအပြင် အဲလိုလေးရေးတိုင်း ဆရာ သည်းခံပေးပါ၊ ဆရာဝန်ဆိုတာ စိတ်ရှည်ရတယ်လို့ ဆုံးမသူတွေကပေါ်လာစမြဲ။
နိုင်ငံရေးမှာ ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ကာလတွေမှာ ပြောကြတယ်။ ဟိုဖက်ကလည်း နည်းနည်းလျှော့၊ သည်ဖက်ကလည်း နည်းနည်းလျှော့၊ ဒိုင်ယာလော့လို့ မြန်မာပြည်ပေါက်ပညာရှင်တွေက ပြောကြတယ်။ အဖြူပညာရှင်တွေကတော့ ဒေါ်စုက ခေါင်းမာတယ်တဲ့။ စစ်တပ်ကိုတော့ ထားပါတော့တဲ့။
တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်းအတွက် ကနေ့ ကြိုတင်အသံသွင်းပါတယ်။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ။
တီဗွီနဲ့ ရေဒီယိုကနေ သဘောအမြင်ပြောရတာ အချက်အလက်ထက် ပိုခက်တာက အချိန်ပါ။ လုံးစေ့ပတ်စေ့ ပြောချိန်မရတာ များတယ်။ ကိုယ်ကနေ ဝေဖန်တာလုပ်ခံရတဲ့ဖက်က တလွဲထင်သွားတာခံရနိုင်တယ်။ ပြောပြီးမှ ဘွာခတ်လို့မရတာမျိုး။
ကြိုတင်ဆွေးနွေးခန်းမျိုးက တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်တာထက်တော့ သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ အသံမဖမ်းခင်မှာ ခေါင်းစဉ်ရထားရင် (ဟုမ်းဝပ်) လုပ်ထားရတယ်။ တချို့အကြောင်းအရာတွေဆို (ရီဆပ်ခ်ျ) ပါ လုပ်ရတယ်။ ဒေါ်စု နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာချိန်နဲ့ သံဃာတော်များအရေးအခင်းတုန်းကတော့ အားလုံးက လက်တန်းချည်းပဲ၊ ပြောရတာကလည်း ဗိုလ်လိုချည်းပဲ။ တီဗွီ တိုက်ရိုက်ကနေ (ဟဒ် တော့လ်ခ်) မှာပါရရင် မထင်တဲ့မေးခွန်းမျိုးက လာသေးတာ။ ဘာရမလည်း ကြာတော့ လေနဲ့လုပ်စားတတ်လာတယ်။
ကနေ့အသံသွင်းရတဲ့ ဆွေးနွေးခန်းမှာ (ဟုမ်းဝပ်) တွေ (ရီဆပ်ခ်ျ) တွေတော့မလိုပါ။ အင်တာဗျူးကို ကောလိပ်တခုအသွား ကားစီးရင်း လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့တဲ့အကန့်အသတ်တွေအပြင် သတိထားရတာရှိပါတယ်။ အဖွဲ့အစုတိုင်းထဲမှာ အဖြောင့်သမားနဲ့ အကောက်သမား ရောထွေးနေတာများတယ်။ တိုင်းရင်းသားဆိုပြီး ခြုံပြောမိလို့ ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို စော်ကားမိမှာလား ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။ အဲလိုဖြစ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ရောက်တဲ့အရပ်မှာ စာကြည့်တိုက်ကို စူးစမ်းမိလာတာ အခုနေရာရောက်မှပါ။ အိန္ဒိယမှာတုန်းက ထူးထူးခြားခြား သတိမထားမိခဲ့ပါ။ ရောက်ရောက်ခြင်း နေအိမ်မှာ အင်တာနက်နဲ့ ဝိုင်ဖိုင်မရေးသေးခင် တလလောက် အိမ်နားက စာကြည့်တိုက်ကိုသာ နေ့တိုင်းသွားအားကိုးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကကြီးတယ်။
တနေ့ကပဲ ကျွန်တော့်ဇာတိမင်းရွာမှာ ကျွန်တော်ရဟန်းခံထားတဲ့ဦးဇင်းကနေ စာကြည့်တိုက်လေး ဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ တယောက်ကနေလှမ်းအသိပေးလို့ ဝမ်းသာရတယ်။ ကနေ့ အင်ဒီယာနာပလစ်မှာရှိတဲ့ ကွန်မြူနတီကောလိပ်ကို ရောက်တော့လည်း စာကြည့်တိုက်ကို သဘောကျခဲ့ပါတယ်။
ကနေ့ စာသင်နေတဲ့ကျောင်းကနေ ပြင်ပလေ့လာရေးသွားတယ်။ ဒီမှာက အဲလိုပဲ Event လိုခေါ်တဲ့ အပြင်သွားတာမျိုး စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေ လိုက်ချင်သူလိုက်။ လိုက်ရင်အမှတ်လည်းရတယ်။ မလိုက်နိုင်ကြတာများပါတယ်။ ကနေ့ Ivy Tech Community College ကောလိပ်ခရီးမှာ ကျောင်းသား ၉-၁ဝ ယောက်ပဲလိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသား (ကချင်တယောက်နဲ့ ချင်းတယောက်) နဲ့ ကျွန်တော်။
(အိုဗီ တခ်) က ကွန်မြူနတီကောလိပ်အမျိုးအစား၊ အများလက်လှမ်းမီအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ကောလိပ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သင်ယူနိုင်တဲ့ဘာသာ (၅ဝ) ရှိတယ်။ လပိုင်းလေးကနေ ၃-၄ နှစ်အထိကြာတာမျိုးတွေ။ ဘာသာရပ်တွေကလည်း စုံတယ်။ အကုန်ရေးရင် ခေါင်းတောင်ရှုတ်မယ်။ စာရင်းကိုင်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ၊ ပညာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေး (သွား၊ ခွဲစိပ်၊ သူနာပြု) ၊ အနုပညာ၊ လက်သမား၊ ဂဟေဆော်၊ စဖိုမှူ့း့။
တခြားနိုင်ငံတွေကနေလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အားကျပြီး ကောလိပ်ဆက်တက်နိုင်အောင်နဲ့ ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရှိသလည်းသိအောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုက်ထဲကကလေး ကျား-မခွဲခြားဘို့ရာ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁၅ ပါတ်နဲ့ ၂၅ ပါတ်မှာရိုက်တယ်။ Level3ultrasound ရိုက်ရင် ၁၂ ပါတ်နဲ့သိနိုင်ပါမယ်။
Amniocentesis ရေမြွာရည်စုပ်ယူစစ်ဆေးနည်းကို အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုလုပ်ရတာများတယ်။ မွေးရာပါကလေးချို့ယွင်းချက်သိချင်လို့သာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ၁-၃% ရှိတယ်။
Chorionic Villus Sampling (CVS) နည်းလည်းရှိတယ်။ Cystic fibrosis နဲ့ Down’s syndrome ဆိုတဲ့ မွေးရာပါရောဂါ သိဘို့စစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ၁-၃% ရှိတယ်။
မိခင်လောင်းသွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ DNA from fetal cells ကိုစမ်းသပ်တာဖြစ်တယ်။ တိတိကျကျဆိုရင် Y chromosome-specific DNA ကိုရှာတာဖြစ်တယ်။ တွေ့ရင် ယောက်ျားလေးဖြစ်မယ်။ မတွေ့ရင် မိန်းကလေးမွေးမယ်။ ကိုယ်ဝန် (၁ဝ) ပါတ်ရှိရင် သိနိုင်ပါပြီ။ Non-Invasive Prenatal Baby Gender Test လို့ခေါ်တယ်။ မိခင်လောင်းရဲ့သွေးကိုစမ်းပြီး ကလေး ကျား-မ ခွဲခြားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေရဘို့ အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်သာ လိုမယ်။ ဈေးကြီးသေးတယ်။ အမေရိကားမှာ $290 ပေးရတယ်။ (၇) ပါတ်ကတည်းကနေသိမယ်လို့လည်း အွန်လိုင်းမှာဖတ်ရတယ်။
CVS နည်းကို ၁ဝ-၁၃ ပါတ်မှာစမ်းနိုင်ပြီး ၁ဝဝ% ကျား-မ ခွဲပေးနိုင်တယ်။ Amniocentesis နည်းကို ၁၄-၂၄ ပါတ်မှာ စမ်းနိုင်ပြီး ၁ဝဝ% ကျား-မ ခွဲပေးနိုင်တယ်။ Free Cell DNA နည်းကို (၇) ပါတ်မှာလုပ်နိုင်တယ်။ ယောက်ျားလေး ၉၅့၎% နဲ့ မိန်းကလေး ၉၈့၆% မှန်မယ်။
ဘာသာပြန်စရာတခုကို တပိုင်းတစလုပ်၊ မေးခွန်းတွေကိုဖြေ၊ မေးနည်းစည်းကမ်းကို လူ ၂ဝ လောက်ဆီပို့ပေးပြီး၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရေးစရာစဉ်းစားပါတယ်။
မနက်က နိုင်ငံရေးစကားပြောချင်သူကလာခေါ်လို့ ထုံးစံအတိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တယ်။ ပြောကြတာတော့ အလေးစားတွေပါ။ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ဘာသာရေးအမည်ခံသတင်းတွေအကြောင်း။ ဘယ်သူတွေကနေ မီးတိုက်ပေးသလည်း၊ ဓါတ်ဆီလောင်းပေးနေသလည်း၊ လေမှုတ်ပေးနေသလည်း။ တချို့အကြောင်းအချက်တွေကို သိပေမယ့် ရေးမဖြစ်၊ ပြောမသင့်တာတွေရှိတယ်။ လူချင်းရင်းနှီးပေမယ့်လည်း ပြောမထွက်တာတွေရှိသေးတယ်။
မမြင်ရတာတွေက ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ရှိတယ်။ အရေးက ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ပါ။ အော်နေကြတာတွေတချို့က မမှန်ပါ။ လုပ်ပြနေကြတာတွေတချို့ကလည်း မှားတယ်။ မသိသေးသ၍တော့ သူ့နယ်ပယ်မှာ ဟီးရိုးတွေလို့ မြင်ကြမယ်။ မျက်လှည့်ဆရာပြတာချည်း ကြည့်နေလို့ကတော့ ဦးထုပ်ထဲက ခိုထွက်လာတာပဲ မြင်ရမယ်။
ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ပြောပါမယ်။ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အရသာမရှိ၊ မီးလောင်ခြင်းကိုအားပေး၏ဆိုတဲ့ဓါတ်ဆိုတာ ငါးတန်းကလည်းကသင်ခဲ့ကြရတယ် မဟုတ်လား။
အိန္ဒိယမှာနေစဉ်က မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကို မကြာခဏသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မဏိပူ၊ မီဇိုရမ်နဲ့ နာဂလင်းတွေ။
၂၈-၄-၂ဝ၁၂ နေ့ကရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို အခုပဲရပါတယ်။ တင်ပေးသူက (ဒေါက်တာ လီဘန် ဆာတို) ဖြစ်တယ်။ သူက မဏိပူပြည်နယ်သား။ (မဂါလယာ) ပြည်နယ် (ရှီလောင်း) မြို့ တက္ကသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာရပ်ကို အထူးပြုသူဖြစ်တယ်။ သူနဲ့အတူ ကွန်ဖရင့်တွေ အတူတက်ခဲ့ဘူးတယ်။ သူကနေ ဒေလီက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကျွန်တော့်ဖွင့်ထားတဲ့ ယမုန်နာဆေးခန်းလေးအတွက် မျက်စိစမ်းသပ်ကိရိယာတစုံနဲ့ နားကြပ်တခု လှူဖူးတယ်။ သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးသူကတော့ Dr. Alana Golmei ခေါ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ Burma Center Delhi (BCD) မှာ တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ မဏိပူမှာနေတဲ့ နာဂအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။
God bless you Dr. Leban Serto!
အဝေးရောက် တိဘက်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Lobsang Sangay (လောဘ်ဆန်း ဆန်ဂေး) ကို ထပ်မံရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အိန္ဒိယမှာနေခဲ့စဉ်က တိဘက် အဝေးရောက်ပါလီမာန် Parliament of the Central Tibetan Administration ကနေဖိတ်ကြားလို့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ ၁၇-၁၈ ရက်နေ့မှာ Dharamsala (ဒါရမ်ဆလာ) ကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့စဉ်က တိဘက်ဝန်ကြီးချုပ် (လောဘ်ဆန်း ဆန်ဂေး) နဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Tibet struggle (2) တိဘက်အရေး (၂)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နေရစဉ်က အသက် (၆ဝ) ပြည့်မွေးနေ့ကို နယူးဒေလီမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တိဘက် အဝေးရောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိဘက်အဆင့်မြင်တက္ကသိုလ် ဒုအဓိပတိ၊ (နောင်မှာ တိဘက်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ) Samdhong Rinpoche (ဆမဒေါင် ရင်ပိုချေး) တက်ရောက်ပြီး အမှတ်တရပစ္စည်းပေးအပ်ပါတယ်။ ပိုးသားနဲ့ ယက်လုပ်ထားတဲ့ ဘုရားပုံတော်တခုလည်းပါတယ်။ ဒေလီက ကျွန်တော့် NCGUB ရုံးခန်းမှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။
ဆရာရှင့် သမီးက သားလေးကိုယ်ဝန်လွယ်ကတည်းက ဆရာရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို အမြဲမပြတ် မေးမြန်း ဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ၂၅-၄-၂ဝ၁၆ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁ဝ:၄၉ နာရီမှာ သားလေးကို ကျန်းမာစွာ ခွဲမွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ဆရာ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကို မေးမြန်းဖတ်ရှုချင်ပါတယ်ရှင့်။ ခုနစ်ပေါင်ရှိတဲ့ သားလေးရဲ့ပုံပါ ဆရာ့ဆီ ပို့လိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာလည်း သားသမီးမြေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင့်။
ကျွန်တော် ဒီအရွယ်လေးတုန်းက မိဘတွေကနေ သူတို့သားလေးကို ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်လို့ မှန်းမထားခဲ့ကြပါ။ ပုံထဲက ကလေး တချိန်မှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်မဖြစ်ဘူးလို့၊ နိုဗယ်ဆုမရဘူး မည်သူပြောနိုင်အံ့နည်း။
ကွန်မင့်တခု = ဆရာ့စာများကိုဖတ်ပြီး မြန်မြန်ရင်သားကင်ဆာကို ကုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၃ ကြိမ်မြောက် ကီမို သွင်းပြီးပါပြီ။
(ခီမို) လို့ အတိုခေါ်နေတာက Chemotherapy (ခီမိုသာရာပီ) ဖြစ်တယ်။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် ဆေးပေးတာ မှန်သမျှကိုခေါ်ပေမဲ့ တကယ်တော့ ကင်ဆာအတွက် ဆေးပေးကုသတာကိုသာ အဲလိုခေါ်တယ်။ (ကင်ဆာ-ဆဲလ်) တွေ ဆက်မပွါးစေမဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲထိုးတာနဲ့ သောက်ဆေးတွေရှိတယ်။ ၂ မျိုးလုံး ပေးတာလဲရှိတယ်။ ဆေးတွေက မနည်းဘူးရှိတယ်။
ရည်ရွယ်ချက် (၃) ခုအတွက် ဆေးပေးကုသနည်း လုပ်ပါတယ်။
၁။ ခွဲစိတ်ပြီးနာက်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဓါတ်ကင်ပြီးနောက်မှာဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာထပ်ပေါ်မလာအောင်လုပ်တယ်။ တကယ်လို့ ရင်သားကင်ဆာက ရင်သားနဲ့ တက်စေ့မှာသာ ရှိနေသေးရင် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဆေးပေးတယ်။ ကင်ဆာပြန်ပေါ်လာမှာကို တားတာဖြစ်တယ်။
၂။ ကင်ဆာ အကျိတ်ကကြီးမယ်ဆိုရင် မခွဲစိတ်ခင် အရင်ပေးတယ်။ ဆေးနဲ့သေးသွားရင် ရင်သားတခုလုံး ထုတ်တာ မလုပ်ရပဲ၊ အကျိတ်ကိုသာထုတ်တာနဲ့ ရနိုင်မယ်။
၃။ တကယ်လို့ ကင်ဆာ တခြားဆီပြန့်နေတဲ့အဆင့်ရောက်နေမှ သိရရင် ဆေးကုနည်းကို အဓိကကုသနည်းအဖြစ်သုံးမယ်။
ဆေးရွေးရတာ လူနာတယောက်ချင်းကို ကြည့်ရတယ်။ Personalized Breast Cancer Treatment Report တဦးချင်းဆီမှာ ရှိရမယ်။ အသုံးများတဲ့ ရင်သား-ကင်ဆာဆေးတွေကတော့
• Herceptin (HER-2 gene ရှိသူတွေအတွက်သာ) နဲ့
• Other drugs = Ixempra, Halaven, Methotrexate (Rheumatrex, Trexall), Tykerb တွေဖြစ်ကြတယ်။
အများအားဖြင့် ၂-၄ ပတ် အစီအစဉ်နဲ့ပေးတယ်။ တချို့ကို ၁ ပတ် တခါပေးတာလဲရှိတယ်။ Adjuvant နဲ့ Neo-adjuvant အတွက်ဆိုရင် ဆေး ၂ မျိုး၊ ၂ မျိုးမက တွဲပေးတတ်တယ်။ ဆေးတမျိုးထဲ သုံးတာက နောက်ကျနေတဲ့ အဆင့်အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဆေးများလေလေ ရလဒ်ကောင်းလေလေဖြစ်သလို၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး များလေလေလဲဖြစ်မယ်။ Adjuvant chemotherapy အတွက်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဓါတ်ကင်တာမလုပ်ခင်မှာ စပေးပြီး ၃-၆ လကြာနိုင်တယ်။ ဆေးပေးနေတုံး သွေးစစ်နေမယ်။ သွေးနီဥ၊ သွေးဖြူဥ နဲ့ သွေးမှုံတွေ အရေအတွက်သိချင်တယ်။ သွေးမှုံသွင်းဘို့လိုရင် သွင်းရတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာဝန်ကို မေးထားပါ၊ လက်ခံနိုင်အောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါ။ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်၊ အစာမစားချင်၊ အားယုတ်၊ ပါးစပ်နာပေါက်၊ ဆံပင်ကျွတ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်၊ သွေးဆုံးတာစော၊ ကူးစက်ရောဂါကို မခံနိုင်၊ သွေးထွက်လွယ်။ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အထီးကျန်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း၊
ရေရှည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = ကလေးမရနိုင်ခြင်း၊ ဆေးကုသနေတုံး ကိုယ်ဝန်လာရှိရင် ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တားနည်း ဆွေးနွေးပါ။ အာရုံကြောတချို့ ထိခိုက်ခြင်း၊ ခြေ-လက် ထုံကျင်ခြင်း၊ Osteoporosis အရိုးအားနည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်အသိနည်းခြင်း၊ ရေတိုမှတ်ဥာဏ်နည်းခြင်း၊ နှစ်ကြာရင် ပြန်ကောင်းတယ်။ နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၊ Doxorubicin (Adriamycin), Epirubicin (Ellence) ဆေးများ၊ Leukemia (လူကီးမီးယား) ဖြစ်ခြင်း၊
ကိုယ်တိုင် သတိထားစရာတွေ = ကောင်းကောင်း အနားယူပါ၊ အစာအာဟာရ လုံလောက်မျှတအောင်စားပါ၊ စိတ်ဖိအား လျှော့ချပါ၊ ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင် ဆင်ခြင်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစာရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်ကိုကယ်နိုင်တာကို သိထားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ကင်ဆာဘေးကဝေးကြပါစေ။
• ကျွန်မက အသက် (၂၆) နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မရင်သား နည်းနည်းကြီးပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ သေးအောင် ဘာဆေးသုံးလို့ရလည်း ဆရာကူညီပါ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့စတိုင်ကို ကြိုက်ပါတယ်ဆရာ။
မိန်းကလေးတိုင်း အရွယ်ရောက်တာနဲ့ ရင်သားထွားလာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ပိုကြီးမယ်။ ကလေးနို့တိုက်လို့လဲ ကြီးမယ်။ ကလေးတယောက်မွေးတခါ ပိုကြီးနိုင်သေးတယ်။ ဒါတွေက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ အဆီ (တစ်ရှူး) များလို့လဲ နို့ထွက် (တစ်ရှူး) တွေက ပုံမှန်နဲ ရင်သားကြီးတာလဲရှိတယ်။
ရင်သား အရွယ်အစားသေးအောင်၊ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းအောင် Reduction mammoplasty ခွဲစိတ်နည်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ ရင်သားကို ကုသတာမှာ သူ့အလုပ်တာဝန်ကို မထိခိုက်ဘို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ (နို့သီး + အရောင်ရင့်အဝိုင်း) နေရာက အရေးအပါဆုံး ဖြစ်တယ်။ အလုပ်မပျက်ဘို့၊ အမြင်လှဘို့နဲ့ စိတ်ကျေနပ်ဘို့ (၃) ချက် လိုပါမယ်။
ရင်သားကြီးလွန်းနေတာကို Macromastia ခေါ်တယ်။ ရင်သားက အရွယ်ကြီးနေလို့ လေးလံနေမယ်၊ တဖက်မှာ ဂရမ် ၅ဝဝ ထက်လေးတာလို့ Shnur Scale နည်းက သတ်မှတ်တယ်။ တွဲကျနေရင် ဇက်ကျော၊ ခေါင်း နောက်ကျောပါ နာနေနိုင်တယ်။ ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလဲရှိနိုင်တယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုနည်းတာ၊ အသက်ရှူရခက်တာ၊ အောက်ခံအရေပြားကို ထိခိုက်တာ၊ အဝတ်အစားရွေးရတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
5. Areola အရောင်ရင့်အဝိုင်း၊
ချုပ်လိုက်ရင် ဆေးနဲ့သေးမယ်ဆိုတာ မယုံပါနဲ့။ သဘာဝ၊ မိမွေးတိုင်းကို ပြင်ချင်တာမှန်သမျှ အဆိုး-အကောင်း ချိန်ဆရမယ်။ (ပလပ်စတစ် ဆာဂျင်) ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီးမှသာ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
မနက်အိပ်ယာထချိန်နဲ့ ညအိပ်ယာမဝင်ခင်အချိန်တွေမှာ မေးခွန်းတွေ၊ စာရေးလာတာတွေကို ဖတ်ရ ပြန်ရပါတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့တွေ့ရတာ အချိန်နည်းပြီး မေးချင်တာမမေးရကြောင်းလည်းဖတ်ရတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ မေးစရာနေရာ (၃) ခုပေးထားလို့ လူနာ (၃) ယောက်ကို တပြိုင်တည်းကြည့်ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို (၃) ခု လုပ်ထားလို့ ကွန်မင့်နဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတခုစီပါတော့ (၆) နေရာအပြင် (အီးမေးလ်) ကတနေရာနဲ့ ကွန်မင့်မှာမမေးပါရန် ဆိုပေမယ့် မမေးတဲ့နေ့မရှိတော့ တံခါးပေါက် (၈) ပေါက်က တန်းစီစောင့်နေကြသလိုပဲ။
နောက်အခက်အခဲက မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာစကားကို မှန်ကန်ပီသဘို့လည်း ခဏခဏရေးတာအားလုံးသိမှာပါ။ စာတွေကို အဖြတ်အတောက်မပါပဲ (စပေ့စ် မခြာပဲ) စာရိုက်တာ နားမလည်နိုင်ပါ။ အဲတော့ မေးခွန်းကို ကူးယူ၊ (နုတ်ပဒ်) မှာ (ပေ့စ်) လုပ်၊ (ဝဒ်) မှာ ပြန်ပြီး (ကော်ပီ-အင်န်-ပေ့စ်) လုပ်၊ အဖြတ်အတောက်နဲ့ သတ်ပုံပြင်တာ ကိုယ့်ဖါသာလုပ်ယူရသေးတယ်။ အချိန်ပိုကုန်ပါတယ်။ မေးနည်းစည်းကမ်းပို့ပေးသူတွေထဲက တဝက်လောက်ကသာ ပြန်မေးကြတယ်။
အဲတာအပြင် သတ်ပုံလွဲလို့ ဖတ်တဲ့သူနားလည်ရင်ပြီးတာပဲလို့ ကွန့်သူတွေ၊ နားထောင်တဲ့သူ သဘောပေါက်ရင်ပြီးတာပဲလို့ တွန့်သူတွေရှိတယ်။ သည်လိုမှန်းသိရင် အထူးကုဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့မိမှာပဲ။ အခုတော့ စကားမပီတဲ့သူပြောတာ နားထောင်နေရတဲ့၊ စာမတတ်တဲ့သူရေးတာ ဖတ်နေရတဲ့၊ ဒုက္ခိတဆရာဝန်ဘဝရောက်နေရပါတော့တယ်။
ဆရာရှင့် သမီး ၂ ယောက်က ၄ နှစ်နဲ့ ၇ နှစ်ပါ။ မနေ့က ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ကာကွယ်ဆေး Menactra သွားထိုးပါတယ်ရှင့်။ ဆေးကို ရေခဲဘူးထဲထည့်ယူလာရပြီး မထိုးခင် ဆရာမ ၂ ယောက်စလုံး ဆေးတွေကို ဆေးထိုးအပ် ၁ ချောင်းဆီထဲ စုပ်ထည့်ထားပြီး အပြင်မှာထားထားပါတယ်။ ပြီးမှ တယောက်ပြီးတယောက် ထိုးပေးပါတယ်။ စိတ်ပူတာက ရေခဲဘူးထဲ ထည့်ထားရတဲ့ဆေးကို ဆေးထိုးအပ်ထဲစုပ်ထားပြီး အပြင်မှာထားထားတာရရဲ့လားသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆေးအာနိသင် ပျက်သွားလားဆိုပြီးစိတ်ပူမိပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ရေခဲဘူးထဲကဆေးကို အပြင်မှာခဏထားပြီး ထိုးလို့ ရ မရ ပြောပြပေးပါဆရာရှင့်။ အကယ်၍မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်း ပြန်ထိုးဖို့လိုမလိုပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။
စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အအေးစံနစ်လိုတာတော့မှန်တယ်။ အဲလောက်ကာလတိုမှာ ဆေးအာနိသင်မပျက်ပါ။
Meningococcal vaccines ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (၃) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Meningococcal conjugate vaccines (Mentactra®, MenHibrix®, and Menveo®)၊
၂။ Meningococcal polysaccharide vaccine (Menomune®) နဲ့
၃။ Serogroup B meningococcal vaccines (Bexsero® and Trumenba®) တွေဖြစ်တယ်။
Quadrivalent Meningococcal Conjugate Vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၁-၁၂ နှစ်ကလေးတွေကို ထိုးပေးတယ်။ (၁) လုံးတည်းလိုတယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှာတခါထပ်ထိုးမယ်။ serogroups A, C, W, and Y ပိုး အမျိုးအစားတွေကို ကာကွယ်မယ်။ meningococcal meningitis နဲ့ meningococcal sepsis ဖြစ်တာ ၂ မျိုးလုံးကို ကာကွယ်မယ်။
Serogroup B Meningococcal Vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၂၃ နှစ်တွေကိုထိုးပေးမယ်။ ၂-၃ ကြိမ် ထိုးရမယ်။
Meningococcal Conjugate Vaccine ကာကွယ်ဆေးကို ကလေး ၂ လကနေ ၁ဝ နှစ်ထိုးပေးမယ်။ (Menactra®, MenHibrix®, or Menveo®) တွေဖြစ်တယ်။
ဦးနှောက်မြှးရောင်ရောဂါက အဖြစ်မများပါ။ ဖြစ်ရင်တော့ အတော်ဆိုးတယ်။ အသက်မသေသူ ၅ ယောက်ထဲက ၁ ယောက်မှာ ဦးနှောက်၊ ကျောက်ကပ်ထိုက်ကျန်ရစ်မယ်။ ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်အသက်ဆုံးပါးတယ်။
Menactra ဦးနှောက်မြှးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသက် (၉) လကနေ (၅၅) နှစ်အထိကိုထိုးပေးတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ မောပန်းမယ်။ အစားပျက်မယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။
ကနေ့ညနေ ကျောင်းသွားဘို့ထွက်တော့ တောင်ဖက်ကောင်းကင်မှာ မိုးတိမ်တွေမှောင်မည်းနေတာမြင်ရတယ်။ အိမ်ထဲကမှာကတည်းက ထစ်ချုန်းသံတွေ ကြားနေရတာပါ။ ခဏနေတော့ မိုးစက်တွေကျလာရော။ (အင်ဒီယာနာပလစ်) မှ တနှစ်လုံးမိုးရွာတယ်။ တနှစ်မှာ ၄ဝ့၇၉ လက္မရှိတယ်။ မိုးမရွာတဲ့လမရှိပါ။ မေလမှာ (၅့၂၇ လက္မ) အများဆုံး။ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ (၂့၁၃ လက္မ) အနည်းဆုံးရွာတယ်။ ဇွန်လ (၄့၃၉)၊ ဇူလိုင်လ (၄့၂၆)၊ ဧပြီလ (၃့၉ဝ)၊ နိုဝင်္ဘာ (၃့၇ဝ)၊ မတ်လ (၃့၃ဝ)၊ သြဂုတ် (၃့၁၉)၊ အောက်တိုဘာ (၃့၁၁)၊ ဒီဇင်္ဘာ (၃့ဝ၈)၊ စက်တင်္ဘာ (၂့၂၅)၊ ဇန္နဝါရီလ (၂့၂၁)။
Basic Cloud Types တိမ်အမျိုးပေါင်း (၁ဝ) ခုခွဲထားတယ်။
(က) High Clouds အမြင့်စားတိမ်များ
(ခ) Mid Clouds အလယ်တန်းအမြင့်တိမ်များ
(ဂ) Low Clouds တိမ်နိမ့်များ
ကနေ့မြင်ရတဲ့တိမ်က Nimbostratus ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မိုးလေဝသပညာမတတ်ပါ။ မီးခိုးမည်းရောင် ရှိတယ်။ မိုး ဒါမှမဟုတ် နှင်းနဲ့ရောထွေးနေတယ်။ နေရောင်ကိုကောင်းကောင်းဖုံးပိတ်ထားတယ်။ တိမ်အောက်ခြေမှာ မိုးနဲ့ဆက်နေတယ်။ Cumulus (Thunderstorm cloud) နဲ့လည်းနီးစပ်တယ်။ ထစ်ချုန်းသံတွေနဲ့အတူ မိုးရွာတော့မယ့် တိမ်တွေကို ခေါ်တယ်။ တိမ်ဆိုင်ကြီးတွေရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ ချောမွေ့နေပြီး၊ ပြားတယ်။ အောက်ခြေမှာ မှောင်မည်းနေတယ်။ အဲတာမျိုးကနေ တခါတလေ မိုးသီးကျတယ်။ တခါတလေ (တိုနေးဒိုး) လေဆင်နှာမောင်း ကျတတ်တယ်တဲ့။
1. Non-dairy creamer ကော်ဖီ-လက်ဖက်ရည်ဖျော်တဲ့ နို့မပါနိုမှုံ့ = Sodium Alumionsilicate - AlNa12SiO5
2. Deodorant အနံ့ပျောက်ဆေး = Isopropyl Alcohol - C3H8O
3. Orange လိမ္မော်ခွံ = Limonene - C10H16
4. Hair Mousse ဆံပင်ပုံသွင်းဆေး = Isobutane - C4H10 + Propane - C3H8
5. Chili and Most Dry Power foods ငရုပ်သီးခြောက်မှုံ့ = Very Large surface area of All Sides
6. Nail polish လက်သည်းဆိုးဆေး = Isopropyle Alcohol - C3H8O + Ethyl Acetate - CH3-COO-CH2-CH3 + Butyle Acetate - C6H1O2
7. Hair Spray ဆံပင်စပရေး = Isopropyl Alcohol - C3H8O
8. Flour ဂျုံမှုံ့ = Very Large Surface Area of all Sides
9. Pool Chlorine + Brake Fluid ကလိုရင်းမှုံ့ (ချွတ်ဆေး) + ဘရိတ်ဆီ = Calcium Hypochlorite - Ca(ClO)2
10. Hand Sanitizer လက်ဆေးရည် = Ethyl Alcohol - C2H6O + Isopropyl Alcohol - C3H8O
ဆံပင်ဆိုးဆေးကနေ ဆက်ဖြစ်တာကို မေးလာသူတွေရော မျက်စိအောက်တင်မြင်ရတာတွေရော မနည်းမနောရှိတယ်။ ဆံပင်ဆိုးဆေးနဲ့မတည့်တာကို Hair dye allergy လို့လည်းခေါ်တယ်။ သာမန်အားဖြင့်ကို လူတွေဟာ ဆံပင်ဆိုးဆေးနဲ့ အတော်မတည့်ကြပါ။ မတည့်တာသုံးမိရင် Contact dermatitis အရေပြားနာဖြစ်မယ်။ အရပြားမှာ မတည့်တာနဲ့ တွေ့ထိတိုင်း ရောင်ရမ်းမယ်၊ နီမယ်၊ ယားမယ်၊ အနာလိုလည်းဖြစ်မယ်။ အနေရခက်မယ်။ အရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ဆိုးဆေးတွေထဲမှာ paraphenylenediamine (PPD) ဓါတ်ပါတယ်။ အဲတာကို မတည့်ကြတာများတယ်။ ဆိုးဆေး သုံးနည်းကို စနစ်တကျညွှန်ကြားစာအတိုင်းသုံးရင်တော့ စိတ်ချရပါတယ်။ black henna tattoo တက်တူးနဲ့ မတည့်သူဆိုရင် ဒါကိုလည်းမတည့်ပါ။
ဆိုးဆေးမသုံးခင် Patch test စမ်းသပ်နည်းလုပ်ရမယ်။ တံဆိပ်တူသုံးရင်တောင်မှ စမ်းပြီးမှသာ သုံးသင့်တယ်။ ဆေးကို နားရွက်နောက်နားဖြစ်ဖြစ် လက်ဖျံမှာဖြစ်ဖြစ် တစက်တို့ထားပါ။ ခြောက်သွေ့စေပါ။ စောင့်ကြည့်ပါ။ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်မယ်။ ယာယံမယ်၊ နီရဲလာမယ်ဆိုရင် အဲဒီဆေးနဲ့ မတည့်ပါ။ တည့်လို့သုံးရင်လည်း ခေါင်းလျှော်ရမယ့်အချိန်မှာ လျှော်ပါ။ လက်အိတ်သုံးပါ။
PPD နဲ့မတည့်သူဟာ oxidation type hair dyes အမျိုးအစားဆံပင်ဆိုးဆေးတွေကိုရှောင်ရမယ်။ အဲတာမျိုးက ဗူး ၂ ခုစီနဲ့လာတယ်။
အဲလိုလူတွေဟာ Azo dyes ကိုလည်းမတည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆံပင်ဆိုးဆေး၊ ဘောလ်ပင်မင်၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီနဲ့ အစားအသောက်တွေ အရောင်ချယ်တွေထဲမှာပါတယ်။ Benzocaine and procaine ထုံဆေး။ Sulfonamides, sulfones, sulfa drugs ဆလ်ဖါပါတဲ့ဆေးတွေ။ Para-aminobenzoic acid (PABA) က နေလောင်ခံဆေးထဲမှာပါတယ်။ PABA-free ကိုသာရွေးသုံးပါ။ Para-aminosalicylic acid တီဘီဆေးတွေနဲ့လည်း မတည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော် လောကနီတိနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်း၊ ၁၊ ၂ ၃ ကိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတက်တိုးရဲ့ လောကနီတိစာအုပ်လေးကို ဖတ်ရင်းရေးတာပါ။ လောကနီတိဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရားဟော မဟုတ်ပါ။ သက္ကရာဇ် ၇ဝ၄ ခုနှစ် သီဟသူမင်းလက်ထက်က အမတ်ပညာရှိ (စတုရင်္ဂဗလ) ကနေ ပါဠိလိုစရေးခဲ့တယ်။ အမတ်ကြီးဟာ သဒ္ဒါကျမ်း၊ ကဗျာလင်္ကာ၊ ဓမ္မသတ်ကျမ်းနဲ့ စစ်မှုရေးရာ၊ အရည်အချင်းလေးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့သိရပါတယ်။
နီတိဆိုတာ ပါဠိစာလုံးပါ။ မြန်မာလို လမ်းညွှန်လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ လောကနီတိဆိုတာ လောကအကြောင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကြီးပွါးတိုးတက်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လောကနီတိအပြင်၊ တကျွန်းနီတိ၊ ရာဇနီတိ၊ ဓမ္မနီတိ၊ မဟာရဟနီတိတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဘုရားဟောမဟုတ်ပေမယ့် ဘုရားဟောကျမ်းဂန်တွေထဲက ကိုးကားချက်တွေ ပါနေတယ်။
အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ ဟင်ဒူဘာသာရေးထဲက Nitisastra (နီတိဆက်စထရာ) ဆိုတာက သက္ကတ (သင်္သကရိုက်) ဘာသာနဲ့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Ethics ဖြစ်တယ်။ မြန်မာလို ကျင့်ဝတ်၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ အဲတာက Bhagavad Gita (ဘဂဗဒ် ဂီတ) ထဲက Virtue နဲ့လည်းဆင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမှန်နဲ့ အမှားကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
နီတိကျမ်းရင်းကို (ဂျိမ်းစ် ဂရေး) ကနေ လန်ဒန်မြို့မှာ The Niti Literature of Burma ဆိုပြီးပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတက်တိုးကလည်း ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့မူကနေ ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လောကကိုကောင်းရာကောင်းကြောင်း လမ်းညွှန်တာတွေကို ဖတ်မှတ် လိုက်နာကြစေချင်တယ်။ ခေတ်အလျှောက် ပြင်သင့်တာတွေပြင်ရင်လည်း သဘောတူစရာရှိရင်တူပါမယ်။ ပြင်တာကိုလည်း ပြင်ထားတာ၊ တခြားကနေကိုးကားတာဆိုလည်း ယူထားတာလို့ ပွင့်လင်းရဲတင်းစွာပြောသင့်ပါတယ်။
• မင်္ဂလာပါရှင် ကျွန်မအသက်က ၃၆ နှစ်ပါရှင့်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ ဆရာဝန်နဲ့ ဒီနေ့ဆေးခန်းပြတော့ autoimmune ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် ရှင့် သွေးစစ်ထားတဲ့အဖြေတော့မရသေးဘူးရှင်။ သိချင်တာက ဒီရောဂါဖြစ်ရင် ဘယ်လို ဆေးသောက်ရမလဲ ဘာတွေရှောင်ရမလဲ။ အသက်ဘယ်လောက်ရှည်နိူင်မလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စာကို မပယ်လိုက်ပါနှင့် -
• အော်တိုအင်မြူးရောဂါတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။
• ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ သွေးစစ်ချက်အဖြေရရင်ဆရာဆီပို့ပေးပြီး အကြံတောင်းလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မပြတဲ့ ဆရာကတော့ ကံဆိုးသူမှဒီရောဂါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ခံစားရတဲ့လက္ခဏကတော့ ခြေဆစ်လက်ဆစ် ကိုက်တယ်။ လည်ပင်းအောက်ကအရေပြားတွေကြမ်းလာတယ်။ ရေချိုးရင် ခြေထိပ်လက်ထိပ်တွေ ပြာလာပါတယ်ရှင့်။ ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီရောဂါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရေးထားတဲ့ block တခါဖတ်ဘူးသလို့မို့ မနေ့ညတညလုံးလိုက်ရှာတာ မတွေ့ပါဘူးရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါရှင့် ဖြေပေးတဲ့အတွက်
• ဆောရီး။ Blog လို့ရေးရတယ်။
• ကျေးဇူးပါဆရာ။ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဆေးပညာဖြင့် အများအတွက် အသက်ကယ်နိုင်ပါစေ။ ဆရာဝန်က Systemic sclerosis ရောဂါလို့ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်သလိုခံစားရတယ်။ ဒီရောဂါက ပျောက်အောင် ကုသလို့ရပါသလား။
Systemic sclerosis (SS) ဆိုတာ (အော်တိုအင်မြူး) ရောဂါတမျိုးဖြစ်တယ်။ အဲလိုရောဂါတွေကများတယ်။ ရောဂါပြီးစနစ် (ခုခံမှုစနစ်) ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ ဒီရောဂါမှာ အရေပြားတွေပြောင်းစေတယ်။ (ကိုလာဂျင်) တစ်ရှူးတွေပိုများနေမယ်။ အရေပြားကိုသာမက သွေးကြောတွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ နှလုံး၊ အဆုပ်၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အစာခြေစနစ်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်။
အသက် ၃ဝ ကနေ ၅ဝ ကြားအဖြစ်များတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ ခံစားရတာ တယောက်နဲ့တယောက် မတူကြပါ။ အရေပြားမှာဖြစ်တာကို Scleroderma လို့လည်းခေါ်တယ်။ Progressive systemic sclerosis, CREST syndrome လို့လည်းခေါ်တယ်။
အရေပြားတွေထူနေမယ်။ ပါးစပ်အနား၊ နှာခေါင်း၊ လက်ချောင်းတွေနားမှာ အရောင်ပြောင်နေမယ်။ လှုပ်ရှားရတာ ခက်ခက်လာမယ်။ ဆံပင်ကျွတ်မယ်။ အေဲပားမှာ ကယ်လ်စီယမ် အဖြူရောင်အကျိတ်လေးတွေပေါ်မယ်။ သွေးကြောတွေ ကျယ်နေမယ်။ အဆစ်တွေနာမယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ ဝမ်းပျက်-ဝမ်းချုပ်မယ်။ မျိုချရခက်မယ်။ ဗိုက်ပွနေမယ်။ အစာအထက်ဆန်မယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ရင် ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ ဖြူပြာပြာဖြစ်မယ်။ Raynaud’s phenomenon ခေါ်တယ်။
ဘာလို့ဖြစ်လာသလည်း သေချာ မသိသေးပါ။ ကုသရတာလည်း ရောဂါပျောက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးပါ။ ဆောရီး။
Corticosteroids စတီရွိုက်ဆေး၊ (အော်တို-အင်မြူး) ရောဂါဖြစ်လို့ ခုခံအားနှိမ်ဆေး methotrexate, cyclophosphamide, azathioprine, and mycophenolate ဆေးတွေသုံးရတယ်။ အကိုက်အနာ သက်သာဆေးတွေ ပေးတယ်။ သွေးတိုးရင်၊ အသက်ရှူခက်ရင် ဆိုင်ရာဆေးတွေပေးမယ်။ ဖီဇီကယ်သာရာပီနည်း လုပ်ပေးမယ်။ ultraviolet A1 phototherapy အလင်းရောင်ကုသနည်းလုပ်ပေးမယ်။ အရေပြားတင်းနေတာအတွက် nitroglycerin ointment လိမ်းဆေးသုံးနိုင်တယ်။
Raynaud's phenomenon သွေးကြောလေးတွေကျဉ်းတာဖြစ်လာရင် nifedipine, amlodipine, diltiazem, felodipine, or nicardipine ဆေးတွေပေးနိုင်တယ်။ အရေပြားမာတာအတွက် D-penicillamine, colchicine, PUVA, relaxin, and cyclosporine ဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။
တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဖြုတ်-ထုတ် အမိန့်တွေ ကြားသိနေရတယ်။ ရခိုင်ပါတီပြီးတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ။ (၈၈၈၈) သတင်းကတော့ တမျိုးပါ။ ဘယ်အသင်းအဖွဲ့မှာ ဖြစ်နေနေ သဘောကျစရာမကောင်းလှပါ။
ဦးနေဝင်းရဲ့ (မဆလ) ပါတီတွင်းမှာလည်း အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ NLD ထဲမှာလည်း ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝမှာ ထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ပါတီကနေထုတ်တဲ့စာထွက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ပြည်ပထွက်တဲ့အမတ်တွေကိုလည်း ပါတီကထုတ်တယ်ထင်တယ်။ သေချာတော့မသိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ထုတ်ခံရတယ်မထင်ပါ။
(မဆလ) မှာဖြစ်ခဲ့တာ၊ NLD မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ အခုဖြစ်နေတာတွေက မတူပါ။ NLD ပါတီထဲမှာ တိုင်တဲ့သူကိုရော အတိုင်ခံရသူကိုပါ ကျွန်တော်က ကောင်းကောင်းရင်းနှီးလို့ ကြိုးစားပြီးထိန်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ တိုင်သူက လူပုဂ္ဂိုလ်ကို မရည်ရွယ်ပါ။ ပါတီကောင်းစေချင်လို့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် (ဖြုတ်-ထုတ်-သတ်) ခေတ်နဲ့ (ဖြုတ်-ထုတ်-မပြုတ်) ခေတ်ကနေ (ဖြုတ်-ထုတ်-ထွက်) ခေတ်တော့ ရောက်လာပါပြီ။
စိုးရိမ်သင့်တဲ့ရောဂါတွေကတော့ နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ၊ ဆီးချိုနဲ့ အဝလွန်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်။ ဒါတွေအပြင် လေနာ၊ သွေးတိုး၊ စိတ်ဓါတ်ကျရောဂါနဲ့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေလည်း ပါတယ်။ သာမန်ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ ဝမ်းမမှန်၊ အိပ်ရေးခက်တာ၊ လူနေမှုဘဝအားနည်းတာ၊ နေမကောင်းသလိုခံစားရတာတွေ ပါတယ်။
• 12:36am ဆရာ့ပုံလားရှင့်
• 12:38am နိုး မဟုတ်ပါ။
• 12:38am ကျေးဇူးပါ။ တူလို့မေးကြည့်တာပါ။
• 12:40am ဆင်တယ်။
• 12:41am အတိတ်မေ့ပြီးလျောက်သွားနေတယ်လို့သတင်းတင်ထားလို့ပါ
• 12:42am ဆောရီး။
• 12:42am ဟုတ်
• အဲဒီပုံထဲကလူ အနာဂတ်ကောင်းပါစေ။
• MAR 21ST, 10:41PM ဆရာရှင့် DNA စစ်ရင်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော်။
• MAR 22ND, 9:07PM မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်ပါတယ်။
• FRI 9:27PM ဆရာရှင့် ယောက်ျားနဲ့တားဆေးမသောက်ဘဲအတူနေရင်ဘယ်အချိန်ကိုယ်ဝန်ရတက်ပါသလဲ
• FRI 11:56PM မေးနည်းစည်းကမ်းအရ မမေးလိုသူများ ဘလော့မှာဖတ်ပါရန်။
• SAT 10:53PM ဆရာရှင့်
• 5:07AM ယောက်ျားနဲ့နေပြီး ၅ လကြာရင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါသလား
• 2:14PM မေးနည်းစည်းကမ်းအရ မမေးလိုသူများ ဘလော့မှာဖတ်ပါရန်။ မေးနည်းစည်းကမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် ပို့လိုက်ပါတယ်။
Final piece of type 1 diabetes puzzle solved ဆီးချိုပဟေဠိအဖြေရရှိ
၂၄-၄-၂ဝ၁၆ နေ့က ဆေးသုတေသနသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) ဘာလို့ဖြစ်သလည်းကို လေ့လာမှု လုပ်နေတာမှာ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ပဟေဠိကို တွေ့ရှိလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) ကိုဖြစ်စေတဲ့ (အင်စူလင်) ဟော်မုန်းကို တိုက်ခိုက်လို့ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ လင်ကွန်းတက္ကသိုလ်ကနေလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်ကနေဆက်ပြီး ဆီးချိုကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေးအတွက် လမ်းပွင့်လာစေပါတယ်။
ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) မှာ ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ (အင်စူလင်) ထုတ်ပေးနေတဲ့ (ဘီတာဆဲလ်) ကိုဖျက်ဆီးနေလို့ဖြစ်တယ်။ (အင်စူလင်) ကနေ သွေးထဲကသကြားဓါတ်ကို ထိန်းပေးနေတယ်။ ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) ရှိသူတွေမှာ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေတွေ့ရတယ်။ ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ တိုက်ဖျက်နေတာ ပစ်မှတ် (၅) ခုရှိတယ်။
၁။ Insulin အင်စူလင်၊
၂။ Glutamate decarboxylase ဂလူတာမိတ် ဒီကာဘောကဆီလေ့စ်၊
၃။ IA-2 အိုင်အေ-တူး၊
၄။ Zinc transporter-8 ဇင့် ထရန်စပိုတာ-အိတ် နဲ့
၅။ tetraspanin-7 တက်ထထွာစပါနင်-ဆဲဗင်းတို့ဖြစ်တယ်။ အဲတာကို အခုမှတွေ့တယ်။
နောက် (၅) နှစ်လောက်ဆိုရင် ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) အတွက် ကုသနည်းပေါ်လာစရာရှိတယ်။
ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်သားလေးက အခု တနေ့ကို ၆ ခါ လောက် ချောင်းဆိုးနေတယ်ဆရာ။ အိမ်မှာလဲ air con ကိုတော့ ၂၇-၂၈ လောက်ပဲထားတာ၊ တနေ့လုံးတော့ ဖွင့်ပါတယ်ဆရာ။ နှာလဲ မကြာမကြာချီတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်လေးအေးရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက အခု ၂လ ခွဲ ရှိပါပြီဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ကလေးငယ်တွေချောင်းဆိုးရင် အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရတယ်။ တခါတလေခက်တယ်။ ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ ခုခံကာကွယ်နည်းလုပ်တာဖြစ်တယ်။ Dry cough ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း အအေးမိတာနဲ့ အလာဂျီကြောင့်ဖြစ်မယ်။ Wet cough ချောင်းဆိုးရင်း တခုခုထွက်မယ်၊ ထွေးအန်မယ်၊ မျိုမယ်ဆိုရင် ဗက်တီးရီးယားတွေကနေဖြစ်စေတာ။
ကလေးအသက် (၄) လအောက်မှာ ဖြစ်ခဲတယ်။ ဖြစ်လည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ဆောင်းတွင်းမှာ ကလေးတွေ ချောင်းများများ ဆိုးတာဟာ Respiratory syncytial virus (RSV) ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာက ဆိုးတယ်။ ကလေးအသက် ၁ နှစ်ကျော်ရင် သိပ်မစိုးရိမ်ရပါ။ အအေးမိတာကြောင့်ဖြစ်ရတာများတယ်။ အလိုလိုပျောက်တယ်။
Common Cold or Flu အအေးမိခြင်းဖြစ်ရင် Stuffy or runny nose နှာရည်ယိုမယ်။ Sore throat လည်ချောင်းနာမယ်။ Dry hack အက်သံပါအောင်ချောင်းဆိုးမယ်။ တချို့မှာ နှပ်တွဲလောင်းကျနေမယ်။ ကိုယ်နည်းနည်းပူမယ်။ ရေ-အရည် များများတိုက်ပေးပါ။ နာစေပါ။ မိဘတွေကစိုးရိမ်လို့ ဆေးပေးချင်မယ်။ အမေရိကန် ကလေးဆေးပညာအသင်းကတော့ ကလေး အသက် ၆ နှစ်အောက်ကို ဆေးပေးဘို့ မတိုက်တွန်းပါ။ ဆေးကြောင့် ဘေးဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ ကလေးအသက် ၁ နှစ်ကျော်ရင် ပျားရည်တိုက်တာ၊ Saline drops ဆားရည်ကို နှာခေါင်းထဲထည့်ပေးတာ၊ Cool-mist humidifier လေကို ရေငွေ့ဓါတ်များအောင်လုပ်ပေးတာကိုသာ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပူတာနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာသက်သာအောင် Acetaminophen ပါရာစီတမောအရည် တိုက်သင့်တယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်အပူချိန် 100.4 F ကျော်မှသာလိုမယ်။ တုပ်ကွေးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ပြပါ။
Croup (Barking cough) ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ ကလေး အသက် ၅ နှစ်အောက်တွေမှာဖြစ်တယ်။ ညအချိန် ထပြီး ချောင်းဆိုးတယ်။ (ဆောရီး) ဟောင်သံနဲ့တူတယ်။ အသက်ရှူရခက်မယ်။ အအေးမိလို့ဖြစ်တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက လေပြွန်ကြီးကိုရောင်စေရင် ဖျံအသံလိုချောင်းဆိုးမယ်။ အသက်ရှူသွင်းရာမှာခက်စေမယ်။ ကလေးကို ရေနွေးငွေ့ရှူပါစေ။ ညနေခင်းလေရှူစေတာလည်းကောင်းတယ်။ cool-mist humidifier ကိရိယာသုံးပါ။
Pneumonia နူမိုးနီးယားဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေရော ဗက်တီးရီးယားတွေကနေပါ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အအေးမိရာကနေလည်း ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ တုပ်ကွေးကနေလည်း ဆက်ဖြစ်တယ်။ Wet and phlegmy ချောင်းအစိုဆိုးမယ်။ ချွဲထွက်မယ်။ ချွဲအရောင် အယွနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗက်တီးရီးယားကနေဖြစ်တာအတွက် ပိုးသေဆေးလိုတယ်။ ဆရာဝန်ပြပါ။
Bronchiolitis or Asthma ပန်းနာလို လေပြွန်ငယ်လေးတွေရောင်ခြင်းဖြစ်ရင် ချောင်းဆိုးမယ်။ နှာရည်ယိုမယ်။ Wheezing ခေါ် အသက်ရှူသံက စီစီစီစီနဲ့ကြားရမယ်။ လေဝင်ရထွက်ရခက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ မိသားစုရာဇဝင်ရှိနိုင်တယ်။ အလာဂျီရာဇဝင်ရှိနိုင်တယ်။ နှင်းကူနာရာဇဝင်ရှိနိုင်တယ်။ ကလေး ၁ နှစ်အောက်မှာဖြစ်တာက Respiratory syncytial virus (RSV) ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်။ ကလေးအသက် ၃ နှစ်ကျော်ရင် ဒီပိုးကနေ အအေးမိတာအဖြစ်များတယ်။
ကိုယ်နည်းနည်းပူမယ်။ နှာရည်ယိုမယ်။ အစားပျက်မယ်။ အသက်ကို ပင့်ရှူနေရမယ်။ မအိပ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ လေပြွန်ကျယ်ဆေးလိုတယ်။
Whooping Cough ကြက်ညှာချောင်းဆိုးဆိုတာ ဆိုးဝါးတယ်။ အသက်ကိုရန်ရှာနိုင်တယ်။ DPT ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ချောင်းဆိုးသံကထူးခြားတယ်။ Whoop အသံကျယ်ပြီး မြန်တဲ့ ဟွတ်-ဟွတ် သံမည်မယ်။ လျှာထွက်နေမယ်။ မျက်လုံးပြာနေမယ်။ မျက်နှာလည်းပြာနေမယ်။
Foreign Object အသက်ရှူလမ်းထဲ တခုခုဝင်လို့လည်း ချောင်းဆိုတာရှိတယ်။ ချောင်းဆိုးသံသေးသေးနဲ့ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နေမယ်။ အဆက်မပြတ်ဆိုးမယ်။
• Common cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
• Common cold prefers cold noses အအေးမမိချင်ရင် နှာခေါင်းမအေးစေနဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/common-cold-prefers-cold-noses.html
• Homemade Humidifier လက်ဖြစ်ရေငွေ့ပေးနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/homemade-humidifier.html
• Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Diseases နူမိုးနီးယားအမျိုးမျိုးနှင့် အသက်ရှူလမ်းရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medicine-for-pneumonias-and-respiratory.html
• Pneumonia in Children ကလေးများတွင်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယားရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pneumonia-in-children.html